Imibhalo kaLarry Harris mayelana Martech Zone |
Imibhalo nge ULarry Harris
U-Larry Harris uyi-CEO ye-Sightly, iplatifomu yokukhangisa esebenza ngamavidiyo esebenzisa ukukhomba okugxile kubantu ukufanisa ababukeli nezikhangiso zamavidiyo eziqondene kakhulu.
Kungani i-GDPR ilungele Ukukhangisa Kwedijithali
NgoLwesibili, ngoJuni 26, i-2018 NgoLwesibili, ngoJuni 26, i-2018 ULarry Harris
Igunya elibanzi lomthetho elibizwa ngokuthi yi-General Data Protection Regulation, noma i-GDPR, laqala ukusebenza ngoMeyi 25. Isikhathi esinqunyiwe besinabadlali abaningi bedijithali abakhangisa ngokuxokozela futhi abaningi bekhathazeke kakhulu. I-GDPR izobiza inani futhi izoletha ushintsho, kepha iyashintsha abathengisi bedijithali kufanele bamukele, hhayi ukwesaba. Nakhu ukuthi kungani: Ukuphela KwePixel / Imodeli Esekelwa Kukhukhi Ilungele Imboni Iqiniso ukuthi lokhu bekudlule isikhathi. Izinkampani bezilokhu zihudula izinyawo, futhi